January 2019 - Page 2 of 13 - Ceelhuur Online
Wararkii ugu dambeeyay muhaajiriin lagu la’yahay xeebaha Jabuuti
January 30, 2019 January 30, 2019 Cali Yare372
Qaramada Midoobey ayaa shaacisay in la la’yahay dad kor u dhaafaya 130 qof oo muhaajiriin ah kaddib markii labo doonyood oo ay saarnaayeen ay kula degeen xeebaha dalka Jabuuti. Ha’yadda IOM waxay sheegtay in dadka degan gobolka Obokh ee Waqooy bari dalka Jabuuti ayaa dhacdadaasi ku wargeliyay booliska kaddib markii ay arkeen labo qof oo […]
January 29, 2019 January 29, 2019 Cali Yare410
Injineero Caddaan ah ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhaawacmeen Qarax goor dhow ka dhacay afaafka hore Jaamacadda Shabeelle oo ku dhaw xarunta Degaanka Garas-baaley. Qaraxa ayaa ahaa Miino, waxaana uu qabsaday gaari ay saarnaayeen Injineero ka tirsan mid ka mid Shirkadaha Korontadda ee ka howlgalla Magaalada Muqdisho. Saraakiisha ammaanka degaanka Garas-baaley ayaa sheegay in […]
January 29, 2019 January 29, 2019 Cali Yare348
Dood ayaa ka dhalatay hadal Saacaddihii lasoo dhaafay baraha bulshadda qabsaday kaasoo ahaa hadal uu Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni uu ka sheegay Soomaaliya xilli uu ka hadlayay Shir looga hadlaayay Arrimaha Garsoorka oo ka dhacay dalkaasi. Waxaa uu sheegay inay jiraan dalal aan dowladnimo ka jirin, isla markaana aan maamul laheyn, Soomaaliya ayuu tusaale u soo […]
January 29, 2019 January 29, 2019 Cali Yare394
Maamulka gobolka Banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo maanta ku qarxay afaafka hore Kaalin Shidaal oo ku taalla agagaarka Xaruntii hore ee Baarlamaanka. Laba Qof ayaa ku geeriyootay shan kalana way ku dhaawacantay Qaraxaasi sidda uu warbaahinta u sheegay Gudoomiye ku xigeenka dhanka Ammaanka gobolka Banaadir. Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa […]
January 28, 2019 January 28, 2019 Cali Yare410
Madaxweynaha Cusub ee Dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi deni oo shir jaraa’id ku qabtay Magalada Garoowe ayaa faah faahin ka bixiyay shirarkii Siyaasadeed ee saacadihii la soo dhaafay ka dhacay Garoowe. Waxa uu sheegay in shirarkaas ay isugu yimaadeen Siyaasiyini ku kala aragti duwan xaalka Siyaasadee ee dalka,hayeeshee ay fursad weyn isugu heleen inay wada […]
January 28, 2019 January 28, 2019 Cali Yare344
Barqanimadii maanta ayaa Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxaa siweyn loogu soo dhaweeyay Magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Wararka aan heleyno ayaa waxa ay sheegayaan in booqashadaas ay salka ku heyso,kadib markii uu casuumaad ka helay Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta Ra’iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxwaynaha Kenya ayaa yeelanaya kulan […]
C/raxmaan C/Shakuur: Waxaa laga yaabaa inuu Madaxweynuhu ii dakaneeyey heshiiskii Kampala.
January 28, 2019 January 28, 2019 admin647
Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, oo dagaal adag oo siyaasadeed ay isaga soo horjeedaan Hogaanka Dowladda Soomaaliya, ayaa sheegay inuusan jirin khilaaf shaqsiya oo uu og yahay inuu kala dhaxeeyo Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. “Khilaaf shaqsiya oo aan anigu ogahay ma jiro” ayuu uga jawaabay su’aal arrintaas la xiriirta oo ay weydiisay warbaahin […]
RW Khayre oo u Ambabaxay Kenya
January 28, 2019 January 28, 2019 Cali Yare366
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, mudane; Xasan Cali Khayre iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa Maanta booqasho rasmi ah ugu ambabaxay Dalka Kenya. Mudane Xasan Cali Khayre ayaa casuumaad rasmi ah ka helay Madaxweynaha Dalka Kenya Uhuru Kenyatta, iyaga oo ka wada hadli doona xiriirka Labada Dowladood iyo ballaarinta iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo […]
January 28, 2019 January 28, 2019 Cali Yare396
Kenya has urged the United Nations to finance the continental counter-terrorism mission in Somalia, arguing that this will stop the country from falling back to Al-Shabaab control, reports CGTN Africa. Foreign Affairs Chief Administrative Secretary Ababu Namwamba said there was need to plug funding gaps and boost counter-terrorism efforts. “The promotion and maintenance of peace […]
Sheekh Shariif ” Dowladda aysan nooga burburin si doqonimo ah”
January 28, 2019 January 28, 2019 Cali Yare769
Madaxweynihii ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo kulamo kala duwan ka wadda Magaalada Garowe ayaa Khudbad u jeediyay qaar ka mid ah ardayda waxka barata Magaalada Garowe Jaamacaddaha ku yaalla. Shariif Sheekh waxaa uu sheegay in loo baahan yahay in Soomaaliya ay maanta ka dhaqaaqdo meesha ay joogto, islamarkaana doorasho qof iyo Cod ah lagu […]